🥇 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်များအတွက်အစီအစဉ်
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 4.9. အဖွဲ့အစည်းအရေအတွက်: 619
ကွန်ပျူတာနည်းပညာအသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဆေးပညာသည်ဆေးကုသရေးစင်တာများရှိစာရင်းအင်းလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်ပေးမည့်ဆေးပညာဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆေးမှတ်တမ်းဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အစီအစဉ်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများရှိရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့် ၀ န်ထမ်းအားလုံးအတွက်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအလုပ်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ခေတ်မီနည်းပညာများစျေးကွက်တွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်များသည်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်များကိုအလွန်အမင်းအထူးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်များကိုအထူးပြုထားပြီးမည်သည့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ကိုမဆိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောကြောင့်သင့်အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်ကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်မှုအစီအစဉ်ကို USU-Soft အစီအစဉ်ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးသင်အားစာရင်းအင်းအဆင့်အသစ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ USU-Soft ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်အစီအစဉ်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ အနှိပ်ခန်း၊ USU-Soft ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းအစီအစဉ်တွင်သင်သည်ဆေးခန်းသို့မဟုတ်ဆေးရုံတွင်အလွန်အဆင်ပြေသောလူနာဒေတာဘေ့စ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်စာရင်းအင်းအစီအစဉ်ကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း၊ ကုသမှုတိုးတက်မှု၊ ဆရာဝန်များ၏အကြံပြုချက်များစသည်တို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
X-rays များကိုလူနာကတ်ပြားနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များနှင့်လည်းတွဲဖက်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်ချိန်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီး desktop ပေါ်တွင်နေရာလွတ်ချွေတာစေသည်။ USU-Soft စာရင်းကိုင်ပရိုဂရမ်တွင် ၀ န်ထမ်းသည်သူနှင့်သူမနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသောလူနာနှင့်အလုပ်အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများအဆိုင်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်လူနာများကိုအချိန်အတန်ကြာခန့်ထားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်စာရင်းကိုင်ပရိုဂရမ်ရှိဆေးဝါးများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းပါတွက်ချက်နိုင်သည်။ USU-Soft စာရင်းကိုင်အစီအစဉ်သည်ဂိုဒေါင်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသင်သည်အကန့်အသတ်မရှိပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများ၊ အသုံး ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများ၊ USU-Soft သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများနှင့်ဆေးရုံများအတွက်ထူးခြားသောစာရင်းကိုင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အလုပ်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေခြင်းတို့ကြောင့်အလုပ်ဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိုပါကဖောက်သည်စစ်တမ်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်၏လူနာများအနေဖြင့်သင့်အကြောင်းမည်သို့ထင်မြင်သည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားလှုံ့ဆော်ရန်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုရမှတ်ကိုသုံးပါ။ ဒါကအလွန်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သောအခြေအနေများကြောင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားခဲ့ရပါက (ဥပမာလေအေးပေးစက်ပြိုကျသည်၊ အခန်းတွင်ပူ။ စားသုံးသူမကျေနပ်သောကြောင့်) ဤညွှန်ကိန်းကိုဘက်လိုက်သည်ဟု ၀ န်ထမ်းများကယူဆနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်ကဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများ (ဥပမာတစ်ခုခုပြတ်တောက်ခြင်း) နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများ (ဥပမာလူနာသည်အကွာအဝေးရှည်စွာစကားပြောရန်လိုအပ်လျှင်) တွင်ယေဘူယျအလုပ်၏ algorithm ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးဖြတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ် Skype) ထိုကဲ့သို့သောညွှန်ကြားချက်များကသင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားကြိုတင်မမြင်နိုင်သောပြproblemsနာများရှိသည့်တိုင်ဖောက်သည်အားကျေနပ်မှုပေးသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး မြင်သောကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုး၏ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွာခြားမှုသည်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည်။ သင်၏မျက်နှာသာပေးမှုတွင်ခြားနားမှုတစ်ခုသည်သင့်ထံသို့လာရန် client ၏စိတ်ကိုဖန်တီးရန်သေချာသည်။
သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းသို့လူနာများအဘယ်ကြောင့်မပြန်လာကြသနည်း။ အကျပ်အတည်းကာလ၌သင့်အားလူနာ ၁၀၀% နှင့် 'ထွက်အလုပ်လုပ်ရန်' နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏မျှော်လင့်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းမှအပအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူနာသည်သင့်အားအစားထိုးရှာရန်သာရနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသောအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ client သည်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုမေ့သွားသည်သို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်သင့်အားမေ့လျော့ရန်ဖောက်သည်၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံသူအားငွေတောင်းခံသောအခါသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း (ဥပမာ၊ နှစ်တစ်ဝက်သို့မဟုတ်နှစ်လအတွင်း) တွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်သူသို့မဟုတ်သူမအားသတိပေးခြင်းရှိ၊
ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်များစာရင်းကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ USU-Soft စာရင်းကိုင်ပရိုဂရမ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်များကိုစောင့်ဆိုင်းစာရင်းတွင်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လအတွက်အချိန်ဇယားကိုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားစောင့်ဆိုင်းစာရင်းတွင်ထည့်ထားသည်။ ၀ င်ရောက်သူအားမှတ်ပုံတင်ရန်လိုကြောင်းသတိပေးလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်များသည်ဂရုစိုက်မှုနှင့်ဂရုပြုမှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖောက်သည်အကြောင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်သိလျှင်၎င်းတို့နှင့်စကားပြောရန်နှင့်သင်၏အာရုံကိုပြရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ဘယ်လိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မလဲ အဲဒါလွယ်တယ်! ဖောက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်စုများကိုသင်သိမ်းဆည်းထားပါကသင်၏ trump ကဒ်များကိုသင်၏လက်၌ကိုင်ထားပါ။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူသည်ကော်ဖီကိုခရင်မ်ဖြင့်ပိုနှစ်သက်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါကသင်မှတ်စုတွင်ထည့်ပြီးနောက်လာသောအခါသူကသူမအားမုန့်ဖြင့်ကော်ဖီဖြစ်စေသည်။ သူသည်သူမဤဂရုစိုက်မှုကိုတန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ USU-Soft ပရိုဂရမ်တွင်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးသင့်ဖောက်သည်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုအသေးစိတ်နှင့်စနစ်တကျထည့်သွင်းရန်ကူညီပေးသောမှတ်စုအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိသည်။ သင်အရည်အသွေးကိုလိုချင်ပါကသင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုင်လျှောက်လွှာကိုကြိုးစားပါ။